အဆိုပါစာနယ်ဇင်း 2018 အတွက် TRF အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမေတ္တာသည်လိင်နှင့်အင်တာနက်
ပညာရှင်များအဘို့အ CPD သင်တန်း
The Reward Foundation မှ ဘလော့များအားလုံး
သင်ခန်းစာအစီအစဉ်များ - အထုပ်များ
သင်ခန်းစာအစီအစဉ်များ - အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေ
အမှတ် 16 နွေရာသီ 2022
နံပါတ် 15 2022 ချစ်သူများနေ့
အမှတ် 14 ဆောင်းဦးရာသီ 2021
အထူး Edition ကိုမေလ 2021
အမှတ် 12 ဆောင်းရာသီ 2021
အမှတ် 11 ဆောင်းဦးရာသီ 2020
နံပါတ် ၁၀ AV & Global Summit အထူး
အမှတ်9နွေ 2020
အမှတ် 8 ဆောင်းဦးရာသီ 2019
အမှတ်7ပွဲတော် Edition ကို 2018
အမှတ်6နွေ 2018
အမှတ်5ဆောင်းရာသီ 2018
အမှတ်4ဆောင်းဦးရာသီ 2017
အမှတ်3အထူး Edition ကို
အမှတ်2နွေရာသီ 2017
အမှတ် 1 အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောသတင်းများ
အဆိုပါစာနယ်ဇင်း 2022 အတွက် TRF
အဆိုပါစာနယ်ဇင်း 2021 အတွက် TRF
အဆိုပါစာနယ်ဇင်း 2020 အတွက် TRF
အဆိုပါစာနယ်ဇင်း 2019 အတွက် TRF
အဆိုပါစာနယ်ဇင်း 2018 အတွက် TRF
အဆိုပါစာနယ်ဇင်း 2017 အတွက် TRF
အဆိုပါစာနယ်ဇင်း 2016 အတွက် TRF
Podcasts များတွင် TRF
အင်တာနက်က Porn အတွက်ဦးနှောက်ထင်သလောက်
Pair ကို Bond စုံတွဲများ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire အဖြစ်မတ်ေတာသညျ
အဆိုပါ Coolidge Effect
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire လျော့ကျလာ
လိင် & Porn
Balance & မညီမျှမှု
တစ်ဦးက Supernormal stimulus
Porn & အစောပိုင်းလိင်ဆိုင်ရာပွဲ ဦး ထွက်
မတ်ေတာ, လိင်, အင်တာနက်နှင့်ဥပဒေ
အင်္ဂလန်, ဝေလနယ်နှင့်မြောက်အိုင်ယာလန်၏ဥပဒေအရ Sexting
အဘယ်သူသည် sexting သနည်း
အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်း
အင်တာနက် ညစ်ညမ်း စွဲလမ်းမှု/ ပြဿနာရှိသော အသုံးပြုမှုတွင် ကူညီပါ။
ဘယ်အချိန်မှာ porn စွဲစတင်ပါသလဲ?
အခမဲ့ Porn Going
TRF 3-Step ပြန်လည်နာလန်ထူမော်ဒယ်
TRF 3-Step ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်သည်
၂၀၂၀ အသက်အတည်ပြုခြင်းဆိုင်ရာညီလာခံ ၂၀၂၀ ပစ္စည်းများ
ပင်မစာမျက်နှာ အဆိုပါစာနယ်ဇင်း 2018 အတွက် TRF
အဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဆုကြေး Foundation မှရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီးအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည်: အညစ်ညမ်းအသိအမြင်အတန်း; အားလုံးကျောင်းများတွင်ထိရောက်သော, ဦးနှောက်-based လိင်ပညာရေးများအတွက်ခေါ်ဆိုခ; ညစ်ညမ်းစွဲနှင့်ငါတို့၏ကိုယ်အလှူငွေအပေါ် NHS ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများအတွက်လေ့ကျင့်ရေးအတှကျလိုအပျ သုတေသနလုပ်ငန်း porn- သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ်။ ဤစာမျက်နှာတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်းသတင်းစာနှင့်အွန်လိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုများကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်
သငျသညျ TRF featuring ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုမြင်ရပါလျှင်ကျွန်တော်တက်ထားကြပြီမဟုတ်, ဒီစာမျက်နှာ၏အောက်ဆုံးမှာအဆက်အသွယ်ပုံစံကို အသုံးပြု. ကိုအကြောင်း note ကိုပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာလအစောပိုင်းတွင် TRF အဖွဲ့သည်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံဘူဒါပတ်စ်သို့သွားရောက်ခဲ့ပြီး Mary Sharpe က“ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေ၏ကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်နွယ်မှုများအပေါ်” တင်ပြသည့်“ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှု - လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များ - အကျိုးသက်ရောက်မှု” အွန်လိုင်းကမ္ဘာ၏ "။ ''AZ Internet ÁLDOZATTÁVÁLÁSHATÁRAI ES HATÁSAI AZ EGYÉNRE ES တစ်ဦးကTÁRSADALOMRA ' ဘူဒါပက်,3ဒီဇင်ဘာလ 2018 ။
26 သြဂုတ်လ 2018 ။ မာရိကရှပ်စကော့တလန်တရားရုံးများ၌ဤဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ရပ်အပေါ်ကျွမ်းကျင်သူဝေဖန်ပေး။ Vic Rodrick ကရေးသားအပိုဒ်။ အဆိုပါပုံနှိပ်ဗားရှင်းစာမျက်နှာများ 10 နှင့် 11 ။
တစ်ဦးကလိင်မှုဆိုင်ရာအသားစားအသက်မပြည့်သေးမိန်းကလေးများနှင့်သူလူမှုရေးမီဒီယာကနေတဆင့်ဆက်သွယ်အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး string ကိုမုဒိမ်းကျင့်ဘို့ထောင်ထဲမှာဘဝနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။
စကော့တလန်ရဲ့အဆိုးဆုံးအွန်လိုင်းဖြီးလိမ်းပုံကိစ္စတွင်ခုနှစ်, Gavin Scoular သားကောင်များမိတ်ဖွဲ့ဖို့ Facebook က, Snapchat နှင့် Skype ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အဆိုပါ 23 နှစ်အရွယ်အပြစ်မဲ့ချတ်နှင့်အတူချွတ်စတင်လိမ့်မည်ဟု - တခါတရံတွင်ပတ် - သူ့ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ပုံတွေပေးပို့ဖို့သူတို့ကို pestering ရှေ့တော်၌ထိုမိန်းကလေးများ၏ယုံကြည်မှုကိုအနိုင်ရ။
ထို့နောက်သူသည်သူတို့ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းနှင့်မုဒိမ်းကျင့်မှီ, '' ကြည့်ဖို့လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှအဘို့အ '' အွန်လိုင်းဓာတ်ပုံများကို post ဖို့ခြိမ်းခြောက်နေဖြင့်လူတစ်ဦးအတွက်သူ့ကိုတွေ့ဆုံသို့သူတို့ကိုငါ blackmailed ။
ထိုအချိန်ကအသက်မပြည့်သေးဘူးသောသူသုံးသားကောင်များအပါအဝင် - သူငါးအမျိုးသမီးငယ်မုဒိမ်းကျင့်၏ကြာသပတေးနေ့ကအပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Livingston အတွက်တရားရုံးချုပ်မှာတစ်ဦးကဂျူရီလည်းသဘောတူညီချက်မပါဘဲညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုယူပြီးနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုဖြန့်ဝေဖို့ခြိမ်းခြောက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးအပါအဝင်တစ်ဆယ်သည်အခြားပြစ်မှုများ, သူ့ကိုပြစ်မှုထင်ရှား။
ကိုးရက်ကြာရုံးတင်စစ်ဆေးစဉ်အတွင်းထောက်ခံသူပြည်ပသွားခွင့်ပြုစတီဖင် Borthwick, တရားစွဲဆိုခြင်း, Scoular တစ်ဦး '' မတော်မတရား pedophile '' branded နှင့်မျက်မြင်သက်သေများကသူ၏လုပ်ရပ်များနီးပါးတူညီအကောင့်အပ်ပေးတော်မူ၏ဟုပြောသည်။ သူကဆက်ပြောသည်: 'သူကသူတို့ကိုမြောကျမတို့ခဲ့သည်။ Gavin Scoular သူတို့သဘောတူညီခကျြ၏နှစ်အောက်, 16 ၏နှစ်အောက်ဖြစ်ကြသည်အပြည့်အဝကောင်းစွာ သိ. သူတို့နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစကားပြောဆိုမှုအတွက်အရသာတွေ့။
'' သူ့ကိုကသူတို့အဝတ်အချည်းစည်းကိုယ်ခန္ဓာ၏ရုပ်ပုံများကိုပြသနိုင်ဖို့သူတို့အားလုံးကိုမေးတယ်။ အချို့ကိစ္စများတွင်သူ့ကိုဓါတ်ပုံတွေကိုပေးပို့ဖို့သူတို့ကိုမေးတယ်။
'' သူကသူတို့ကိုသူလိုချင်ဘာလုပ်ရ, သူတို့ရဲ့အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်မယ့်နည်းလမ်းအဖြစ်သူတို့အားပုံရိပ်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအမှု၌သူသည်မိန်းကလေးများနှင့်အတူစည်းဝေးမှပေါ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သူ့ကိုယ်ပိုင်ဝန်ခံချက်အားဖြင့်သူတဦးတည်းအကြောင်းပြချက်အဘို့ထိုသူတို့နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် - ။ ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမြားတှငျပါဝငျခွငျး ''
တဦးတည်းသားကောင် Niddrie, Edinburgh ကနေ Scoular, သူမ၏ဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာသူမ 13 ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ သူကသူ့ကိုသူ့ကိုယ်သူ၏အဝတ်အချည်းစည်းဓါတ်ပုံတွေကိုပေးပို့ဖို့သူမ၏မေးမြန်းခြင်းမပြုမီပိုမိုယုတ်မာသောမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်တောင်းဆိုမှုများနှင့်အတူသူမ၏တရစပ်။
လို့သူကပြောပါတယ်: 'ငါဖြောင့်ကွယ်ပျောက်ခြင်းမရှိဟုဆိုသည်ဒါပေမဲ့သူမေးမြန်းခြင်းနှင့်မေးမြန်းခြင်းထားရှိမည်။ ငါမှမလိုချင်ခဲ့ပါဘူးသူ့ကိုပြောပြသည်ပေမယ့်ငါ 14 ခဲ့သောအခါငါသူ့ကိုပုံကိုစေလွှတ်။ , ငါဘာကြောင့်မသိရပါဘူး။
'' နောက်မှငါသူ့ကိုသူဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ post ခြိမ်းခြောက်ပထမဦးဆုံးတဦးတည်းစေလွှတ်ခဲ့သည်။
သူ့ကိုငါကသူပြီးသားအားလုံး Facebook ကိုကျော်ရှိခဲ့ပုံ post မယ်လို့အခြားရုပ်ပုံမပို့ခဲ့ပါလျှင် '' သူကပြောပါတယ်။
'' ဒါဟာငါ့ကိုငါပွုခဲ့ခံစားရတယ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ငါသည်ခပ်သိမ်းသော Facebook ကိုကျော်ငါ၏အ Boob မလိုချင်ခဲ့ပါဘူး။
'' ငါကဒုတိယရုပ်ပုံလွှာကိုစေလွှတ်ပြီးနောက်သူက Facebook ပေါ်မှာပုံထားချင်ပါတယ်ဟုတောင်းပန်ဒါကြောင့်သူ့ကိုငါလွှတ်။ '
သူမသည်သူမမုဒိန်းကျင့်ဘယ်မှာ Scoular ရဲ့အိမျ, သှားဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။
လို့သူကပြောပါတယ်: 'ငါငိုချင်ခဲ့တယ်ဒါပေမယ့်ကိုယ့်အတွက်ကအားလုံးကိုထားရှိမည်ငါကြောက်တယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ။ ကိုယ့်အဖြစ်မကြာမီငါတတျနိုငျသကဲ့သို့ရှိထဲကရချင်တယ်။ ငါကစိတ်ထိခိုက်သူ့ကိုသို့ပြောသည်။ ငါရပ်တန့်ဖို့သူ့ကိုသို့ပြောသည်။ သူကပဲသွားနေခဲ့တယ်။ ''
Scoular တစ် webcam ကနေတစ်ဆင့်သူမ၏ဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်သားကောင် 14 ဖြစ်ခဲ့သည်။
သူမသည် Scoular တစ် Skype ကို video chat စဉ်အတွင်းသူမ၏ရင်သားမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်သို့သူမ၏ blackmailed ကပြောပါတယ်, သူ screenBeing ယူ
'ငါငိုချင်ခဲ့တယ်။ ငါကြောက်တယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ '' ကိုရပ်တန့်ဖို့သူ့ကိုပြောပြသည်
ရိုက်ချက်။ ငွေညှစ်အဖြစ်ပုံအသုံးပြုခြင်းသူ Leith အတွက်သမုဒ္ဒရာ Terminal နှင့်အနီးသူ့ကိုအတူတက်ဖြည့်ဆည်းရန်သူမ၏အတင်းအကျပ်နှင့်လိင်သူမ၏စော်ကား။
သူကလူမှုရေးမီဒီယာကနေတဆင့်သူမဆက်သွယ်နဲ့သူ့ကိုဖြည့်ဆည်းရန်သူမ၏ဖျောင်းဖျရသောအခါ Scoular ရဲ့အငယ်ဆုံးသားကောင်သာ 12 ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမ၏အသက်အရွယ်ကို သိ. ရှိနေသော်လည်း - သူတို့ကသူကိုနမ်းနှင့်သူမ၏ groped ဘယ်မှာ Portobello ဂေါက်ကွင်းမှသွားလာ၏။
သူလည်းကလေးတွေရေကူးဖို့ဆုံးမဩဝါဒ ပေး. , သူကောင်စီရေကန်မှာအသက်ကယ်သမားအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့နှစ်ခုသားကောင်များကိုပြောသည်။
Scoular သူတစ်ဦး '' ပြစ်မှားပါတီ '' ကြီးနှင့်သားကောင်များသူ့ကိုအကြောင်းကို '' အံ့ဩမုသာစကားကို '' ကိုပြောသည်ကြောင်းပြောဆိုထားသည်။ သူကထိုလူအပေါင်းတို့သည်လိင်မှဝန်ခံခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
သူကပြစ်မှုများ၏အချိန်တွင် 2010 နှင့် 2014 အကြားသူ '' လိင်ငယ်ရွယ်မိန်းကလေးငယ်များဖို့ဆွဲဆောင် '' ခဲ့ဝန်ခံပေမယ့်ယခုကအကြောင်း '' စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သော '' ခံစားရတယ်။
ဟုသူကဆိုသည်: 'ငါပြုသောအမှုဖွင့်အဘယ်သို့သောအကြောင်းမပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါပြုသောအမှုဖွင့်အရာကိုသိ, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ငါပြုပြီးပြီမှားယွင်းနေခဲ့သည်။ ''
ကို 'လျှို့ဝှက်သဘောသဘာဝ' - - အွန်လိုင်းဖြီးလိမ်းပုံကိုပိုမိုပျံ့နှံ့ဖြစ်လာခွင့်ပြုလူမှုမီဒီယာ၏နောက်ဆုံးညဥ့်, မာရိရှပ်, ကမ်ပိန်းအဖွဲ့ကဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်သည်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းနှင့်အမည်ဝှက်သတိပေးခဲ့သည်။
လို့သူကပြောပါတယ်: 'ဒါဟာမေတ္တာနှင့်နှစျလိုဖှယျအွန်လိုင်း၏စကားနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကိုဆွဲဆောင်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်တစ်ဦးဓာတ်ပုံရိုက်ဘို့တောင်းပါကပုံတစ်ပုံကိုပေးပို့ဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ ''
မစ္စရှပ်ထိုကဲ့သို့သော Kim Kardashian အဖြစ်နာမည်ကြီးတွေလူငယ်အချို့က sexualised ခံရဖို့ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်ထင်အောင်ကဆက်ပြောသည်။
လို့သူကပြောပါတယ်: 'ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုသင့်ခန္ဓာကိုယ်ပြသခြင်းနှင့်စံတန်ဖိုးအချက်သူတို့မြေများပျက်စီးနေအနုပညာရှင်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ရှိသည်ရဲ့အကြောင်းပါ။ ဒါဟာပိုပြီး pornified ယဉ်ကျေးမှုပါပဲ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းကယနေ့ဘုံတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲဒါကိုအလွန်လွယ်ကူယောက်ျားအမျိုးသမီးငယ်ကောက်ရန်အဘို့အအောင်ဖြစ်ပါတယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်မြင်ကြ။ ဒါဟာသူတို့ကိုပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ဆောင်ဖို့အောင်ကြောင်းယဉ်ကျေးမှုပါပဲ။ ''
Scoular မူလက 132 မိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးငယ်ဆန့်ကျင် 100 စွဲချက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ အစိုးရရှေ့နေတွေအရှိဆုံးလေးနက်ပြစ်မှုများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်မှုမှာသူ 34 စွဲချက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ သက်သေခံခဲ့ပြီးနောက်
သူတို့ရဲ့သက်သေအထောက်အထားပေး Scoular Skype ကိုကနေတစ်ဆင့်တစ်ဦး 12year အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူအွန်လိုင်းလိင်ချတ်ရှိခြင်းနှင့်သူမသူ့ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုပေးပို့တောင်းဆိုတဲ့ 14year အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ဦးတိုက်ခိုက်ရန်လိင်ထို့နောက်မြောကျမတို့အပါအဝင်စွဲချက်မှအပြစ်ရှိကြောင်း။
သူလည်းအခြား 14 နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူအသက်မပြည့်သေးလိင်မြောကျမတို့နှင့်ရှိခြင်းနှငျ့ပတျသကျသောခြောက်လလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများဝန်ခံခဲ့သည်။ ကြာသပတေးနေ့ကတရားရုံးချုပ်မှာသူဆိုရှယ်မီဒီယာအပေါ်ကသူတို့ကို '' မြောကျမတို့ '' ပြီးနောက်ငါးသားကောင်များမုဒိမ်းကျင့်၏ခုနစ်ခုစွဲချက်၏အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါဂျူရီလည်းအဓမ္မနှင့် libidinous အမူအကျင့်များနှင့်ဥပဒေမဲ့လိင်များအတွက်အရွယ်မရောက်သေးသူတွေ့ဆုံအပါအဝင်တစ်ဆယ်နောက်ထပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများ, သူ့ကိုအပြစ်ရှိတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါအပြစ်ရှိကြောင်းစီရင်ချက်ပြီးနောက် Scoular နှစ်ခုအသက်မပြည့်သေးမိန်းကလေးငယ်များနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလားတူပြစ်မှုများအဘို့, 2014 အတွက်ချမှတ်ထားလေး-and ahalf နှစ်တိုးချဲ့ဝါကျ, အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ကြောင်းပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
တရားသူကြီးသခင်ဘုရား Summers Edinburgh အတွက်တရားရုံးချုပ်မှာစက်တင်ဘာလ 19 သည်အထိဝါကျရက်ရွှေ့ဆိုင်း။
သူ Scoular သတိပေးခဲ့သည်: 'သင်ဝါကျဟာအလွန်ရှည်ကာလမှာရှာနေမထင်ယောင်ထင်မှားအောက်မှာဖြစ်သင့်သည်။ ' '
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်တွင်သတင်းနှင့်နည်းပညာသတင်းထောက် Mark Blunden သည် The Reward Foundation နှင့် erectile dysfunction ပြtoနာအားကောင်းမွန်သောသတင်းပေးပို့ခဲ့သည်။ စာမျက်နှာ 11 လန်ဒန်ညနေခင်းစံ၏။ ဒါဟာအစကတက်ခူးခဲ့သည် နိုင်ဂျီးရီးယားသတင်းလွှာ.
16 ဇူလိုင်လ 2018 ။ ကေး Smith ကအနည်းငယ်အဘို့တနင်္ဂနွေဆောင်းပါးအပေါ်မေးလ် re-ရေးသားခဲ့သည် အဆိုပါ Times သတင်းစာ.
15 ဇူလိုင်လ 2018 ။ မာရိကရှပ်အဆိုပါဆုကြေး Foundation ကတီထွင်ခံရမူလတန်းကျောင်းများအတွက်သင်ခန်းစာများများ၏ content တွေအကြောင်းတနင်္ဂနွေရက်တွင်စကော့တလန်မေးလ်ထဲမှာတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါသည်။ စာမျက်နှာ 21 ။ ဆောင်းပါး၏တစ်ဦးကဒစ်ဂျစ်တယ်ဗားရှင်းရရှိနိုင်ပါသည် ဒီမှာ.
15 ဇူလိုင်လ 2018 ။ မာရိကရှပ်ဒီ Full-စာမျက်နှာထင်မြင်ချက်အပိုင်းအစရေးသားခဲ့သည်။ စာမျက်နှာ 38 ။
15 ဇူလိုင်လ 2018 ။ မူရင်းဆောင်းပါးစာမျက်နှာ7အပေါ် Scotsman အတွက်ထင်ရှားတွေ့မြင်နိုင်ပါသည် အွန်လိုင်း (သတိပေးချက် - ပုံရိပ်ထွက်ပေါ်လာနိုင်သည်) ။ ဒီဆောင်းပါးကိုလည်း Tax Free Insider ကကောက်ယူခဲ့သည်။
4 ဇူလိုင်လ 2018 ။ မာရိကရှပ်နှင့် Darryl Mead SecEd, ဗြိတိန်တွင်အလယ်တန်းကျောင်းများအတွက်ဦးဆောင်အွန်လိုင်းပေါ်တယ်များအတွက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ မူရင်းဆောင်းပါးမြင်နိုင်ပါသည် ဒီမှာ.
၂၀၁၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ တွင် Mary Sharpe ကိုအွန်လိုင်းစပိန်သတင်းဝန်ဆောင်မှု Tu Cosmopolis တွင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။
25 ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 ။ ညစ်ညမ်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတခုတခုအပေါ်မှာကျယ်ပြန့်စပိန်ဘာသာစကားဆောင်းပါးအဖြစ် Darryl Mead နဲ့ Mary ရှပ်ကနေကိုးကား, ဂယ်ရီ Wilson ကနှင့်ဒေါက်တာ Valerie Voon အတူဂါယူဆပါသည်များ၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဇာတ်လမ်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ အပြည့်အဝဆောင်းပါးရရှိနိုင်ပါသည် ဒီမှာ.
4 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2018
ဇာတ်လမ်းကိုလည်းရရှိနိုင် အွန်လိုင်း Sunday Times ၏မှာ။
24 ဇန်နဝါရီလ 2018
ဤဇတ်လမ်းလည်း 24 ဇန်နဝါရီလ 2018 အပေါ်စကော့တလန်ဘဏ္ဍာရေးသတင်းအထဲသို့ပြေး ဝင်.
Audiobook - အဲဒါကို Audible မှာအခမဲ့ရယူပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောသတင်းများ သငျသညျမေတ္တာ, လိင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးနှောက်အပြန်အလှန်လမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဆောင်ခဲ့လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့ inundate မည်မဟုတ်, သင်ဘယ်အချိန်မဆိုနှုတ်ထွက်နိုင်ပါတယ်။
Touch ကိုအတွက် Get
သင်တို့သည်လည်း Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုကျလြှောကျနိုငျ
မိုဘိုင်း +44 (0) 7506 475 204
cookie မူဝါဒ | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ | ဥပဒေ Disclaimer | MEDICAL Disclaimer
© 2021 ဆုခမြယျ Foundation: All rights reserved
ရှာဖွေရန်“ Enter” ကိုနှိပ်ပါ
ဒီ website သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ကျနော်တို့သင်ဤအတူအိုကေပါပဲယူဆပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကရွေးချယ်ထွက်နိုင်ပါတယ်သင်ဆန္ဒရှိလျှင်။Accept ဆက်ဖတ်ရန်